Accueil > Gazetin'ny nosy > Teny enti-mampianatra : Tsy ny sekoly katolika ihany no tsy miankina
Teny enti-mampianatra : Tsy ny sekoly katolika ihany no tsy miankina
Isan’ny voafaritry ny teti-pivoaram-panabeazana (Plan sectoriel de l’éducation) fa ny tenin-dreny no tokony ho teny enti-mampianatra ho an’ny taona telo voalohany any amin’ny fanabeazana fototra eto Madagasikara.
Mitsipaka izany ny rafitry ny sekoly tsy miankina fa mitaky ny hampiasana ny teny Malagasy sy teny frantsay ho teny enti-mampianatra manomboka amin’ny fanabeazana fototra ka hatrany amin’ny anjerimanontolo. Ny antony, hoy ny fanazavan’izy ireo, dia satria mbola amin’ny teny frantsay ny teny ampiasaina amin’ny fitantanan-draharaham-panjakana (administration).
Marihina fa ny mavesa-danja ao amin’ny sekoly tsy miankina eto dia ny sekoly katolika. Misy koa ireo sekoly mpitady vola fotsiny izay mandrangranga ny hoe “teny frantsay no teny enti-mampianatra” (langue d’enseignement, en français).
Voalohany aloha dia ny tombontsoan’ny mpianatra izay hitarika mankany amin’ny tombontsoam-pirenena no tokony hialoha lalana ny zavatra rehetra rehefa mandinika ny raharaham-pampianarana amam-panabeazana isika.
Ny manam-pahaizana sy mpandalina ary mpikaroka ambony maneran-tany dia samy nanamarika fa ny nahatafita azy ireo, raha ny tontolon’ny fampianarana sy fanabeazana no asian-teny, dia ny fampiasana ny tenin-dreniny tamin’ny teny nampianarana azy”.
Raha ny hahaizana tenim-pirenena vahiny no ahiahin’ny olona sasany, na teny frantsay na teny vahiny hafa, dia azo hamafisina ny taranja momba izany fa ny mahasoa ny mpianatra dia ny fampiasana ny tenin-dreny ho teny enti-mampianatra. Ho an’ny mpianatra Malagasy izany dia ny teny Malagasy no mahasoa azy ho teny enti-mampianatra, indrindra fa any amin’ny fanabeazana fototra. Azo tohizana hatreny amin’ny oniversite izany raha manam-piniavana ny ho amin’izany isika, ary azo atao tsara ny miantoka ny fahaizan’ny mpianatra teny vahiny na vao miala any amin’ny fanabeazana fototra aza izy.